Degdeg C/rashiid Cali Shucaac oo kashifay siro badan sheegayna in Madaxwayne Mustafe Cagjar u adeegayo kaliya danaha beesha Ogadeen - www.dhanbaalnews.com
Sida uu qoraalkan ku sheegay walaalkey Madaxweyne Mudane Mustafa Omer „dowladaha macangaga ah ayaa marka shacabkooduu yidhaah waa Maxey sidani lagu yaqaan waawareey, ka kacaay shacabakeenaa la qaybinayaa, calankayga, nuurow iyo wax kamid ah“
Mudane Maanan kaa filaynin inaad dowlad macangaga ah noo hogaaminayso balse qaylada iyo ka kacaayda maanta kasoo yeeraysa dowladaada iyo dhulkii Oromo ayaa qaadan maxay tahay??
Mudane miyeysan haboonayn inaad taageerayaashaada reeraysan balse ururada kala duwan katirsan inaad usheegto in raga aad isku haysaan siyaasada xisbiga aad kawada tirsan tihiin halka xisbi eed amaanaysay aysana u oolin xubnaha xisbiyada kale xataa haddii aad wada dhalateen. Mudane miyeysan sumcad darro kugu aheyn inaad bulshada hab beelaysan usii kala jabiso adoo markii horaba ku guulaysan waayey inaad aragti ku mideyso iscafintii iyo isa saamixiina ka dhaadhicin waydey.
Mudane danta dalka, dadka iyo diinta ayaa ka muhiimsan kursigaaga ee ha noqon sidii ninkii kaa horeeyey. Mudane isbadalkan qeyb ayaad kasoo qaadatey abaal aad uweyna bulshadu way kuugu hayn abidkood balse haddii aad qas iyo qalalaaso ka dhax abuurto siina kala qaybiso bar madow ayeey waligaa kugu noqon.
Mudane waa dhab inaan ku Kala aragti duwanahay jihada deegaanku hadda u dhaqaaqi balse shakhsiyan kuuma necbi adarin iyo karaamo badana waan kuu hayaa. Mudane xil iyo xoolo toona maynaan doonayn ee Dulmi ayeeynu lawada dagaalamaynay, qadarta Eebe ayeeyna kudhacdey inaad xilka qabato. Maantana si sharaf leh uga dag haddiiba ay dadkii aad uhalgamaysay ay dhibi kasoo gaadhi isku dhajinta Kursiga. Mudane qiimee xaaladaha I nagu xeeran dadkaagana utanaasul.